कलिला विद्यार्थीको ‘सुपरस्टार’ बन्ने सपना ! पूरा कसले गरिदिने ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
कलिला विद्यार्थीको ‘सुपरस्टार’ बन्ने सपना ! पूरा कसले गरिदिने ?
‘बाल नाटक महोत्सवमा नवराजको संघर्ष’
माघ १४, २०७५ सोमबार १०:३५:११ | विष्णु विश्वकर्मा
काठमाण्डौ – कपनको सान्तेन ममोरियल स्कुलमा पढ्ने कृष्णा भारतीलाई चलचित्रमा अभिनय गर्ने रहर छ । यसका लागि उनी दैनिक ‘रिहर्सल’ गर्छिन् । गीत गाउँछिन् । अभिनय गर्छिन् । चलचित्रकै शैलीमा लबज मिलाएर संवाद बोल्छिन् ।
स्कुलमा शिक्षकले पढाउँदा ध्यान दिएर पढ्छिन् । उनलाई सुपरस्टार बन्ने रहर छ । त्यो पनि अहिलेकी चल्तीका नायिका प्रियंका कार्की जस्तै ।
‘मलाई लभसबको लडफामा पर्नु छैन । मलाई त प्रियंका कार्की जस्तै सुपरस्टार बन्नु छ’ १० औँ बाल नाटक महोत्सवमा प्रदर्शन भएको ‘पूर्णिमाको सपना’ नाटकमा अभिनय गरेकी कृष्णा भन्छिन् ‘मेहनत गर्दै जान्छु । एकदिन कसो प्रियंका कार्की जत्तिकै नबनौंला र ?’
अभिनयका लागि मरिहत्ते गर्ने कृष्णाको सपना पूरा गर्न रंगकर्मी नमस्ते दिवाकर घिमिरेले नाटक ‘पूर्णिमाको सपना’ लेखे । विद्यालयले १० औँ बाल नाटक महोत्सवमा भाग लिने घोषणा गरेपछि दिवाकरले नाटकको ‘रिहर्सल’ सुरु गरे । ‘लिड रोल’ उनै कृष्णालाई दिएर ‘पूर्णिमा’ बनाए ।
अनि उनकै साथी तेन्जिङ लामालाई ‘रमा’ बनाए । नाटकमा रमा र पूर्णिमा मिल्ने साथी हुन् । सँगै पढ्छन् । स्कुल पढ्दै गरेकी तर सुपरस्टार बन्ने सपना पालेकी ‘पूर्णिमा’ भने बलात्कृत भइन् । त्यो पनि मिल्ने साथी ‘रमा’कै दाईबाट । बलात्कृत भएपछि ‘पूर्णिमा’ डिप्रेसनमा परिन् ।
चिच्याउने, मुर्छा पर्ने भएपछि पूर्णिमालाई घरकाले अस्पताल पुर्या‍ए । अस्पतालको बेडमा डाक्टरले सोध्दा उनको सुपरस्टार बन्ने आत्मबल मरिसकेको थियो । देशमा बढ्दै गएका बलात्कार, हत्या र बालिकामाथिको यौन हिंसाले विद्यार्थीको सपना चकनाचुर बन्दै गएको छ । नाटक ‘पूर्णिमाको सपना’को सार पनि यही हो ।
‘बलात्कारपछि हत्या भएकी कञ्चनपुरकी १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्तकै सारमा नाटक ‘पूर्णिमाको सपना’ प्रदर्शन गरिएको हो । पूर्णिमाको जस्तै सपना निर्मलाको पनि थियो होला । तर पुरा हुन सकेन’ निर्देशक घिमिरेले नाटकको सारकथा वास्तविकतामा ओकले ।
सुपरस्टार बन्ने सपना !
नाटकमा बलात्कृत बालिकाको भूमिका निभाउनु परे पनि यतार्थमा कृष्णाको सपना सुपरस्टार बन्ने नै छ । तर त्यो लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने ? स्पष्ट जवाफ कृष्णासँग छैन ।
‘अहिले कक्षा ७ मा पढ्छु । अझै धेरै मेहनत गर्छु । सबैको साथ पाए भने आफ्नो सपना पूरा गरेरै छाड्छु’ उनले भनिन् । चलचित्रमा अभिनय गर्न अभिनय कला सिक्नुपर्छ । यसका लागि दैनिक कक्षा लिनुपर्छ ।
अभिनय कलामा पोख्त रंगकर्मीले प्रशिक्षण दिन्छन् भन्ने कुरा थाहा भएको कृष्णालाई केही दिन मात्रै भयो । जुन दिनदेखि महोत्सवमा नाटक देखाउनका लागि रंगकर्मीबाट कृष्णाजस्ता विद्यार्थीलाई सिकाउन थालियो ।
तर काठमाण्डौ उपत्यकामै भए पनि दैनिक कक्षाकोठामै अभिनय सिक्ने अवसर र आवश्यकताबारे कृष्णाजस्ता धेरै विद्यार्थी बेखबर छन् । अझै पनि अभिनय विद्यार्थीका लागि रहरकै विषय बनाइएको छ । विद्यार्थीलाई व्यवसायिक रंगकर्मी बनाउन लगभग सबै विद्यालय र शिक्षक धेरै पछाडि छन् । थोरैले मात्रै अघि बढेर सोचेका छन् ।
उनकी साथी तेन्जिङले पनि ठूलो स्टार बन्ने सपना पालेकी छन् । तर कलाकार भन्दा उनलाई समाजसेवा गर्ने रहर छ । दुबैको लक्ष्य एउटै भए पनि बाटो फरक फरक छ ।
‘पूर्णिमाको सपना’ नाटकमा अभिनय गरेका अरु बाल कलाकारको सपना पनि उस्तै छ । पेशा डाक्टर इन्जिनियर नै किन नहोश । अभिनय कला सिक्ने र यसबारे जान्ने बुझ्ने रहर सबैलाई छ । तर रहर गरेजस्तो सिक्न सजिलो कसैलाई छैन ।
‘मैले भविष्यमा के बन्छौ ? भनेर विद्यार्थीलाई सोधे भने धेरैले जवाफ दिने भनेको डाक्टर इन्जिनियर नै हो । तर केही विद्यार्थीले भन्न थालेका छन्, म नेपाली फिल्मको सुपरस्टार बन्छु । गायक बन्छु । साहित्यकार बन्छु भन्ने आवाज पनि थपिने गरेको छ । यो राम्रो संकेत हो’ उत्साहित स्वरमा रंगकर्मी दिवाकर भन्छन् ।
कहिलेकाहीँ अभिनय गरेकै भरमा रंगकर्मी बन्ने रहर विद्यार्थीलाई जाग्नु स्वभाविक हो । तर बुझाईमा अझै पनि फरक छ । त्यो भन्दा ठूलो समस्या स्कुलदेखि नै अभिनय र संगीतबारे न्यूनतम जानकारी पनि छैन । जसकारण विद्यार्थी वर्षौं भौंतारिएपछि मात्रै आफ्नो लक्ष्य समात्न पुग्छन् ।
‘१० कक्षासम्म सबैले पढ्छन् । तर त्यसपछि कोही विज्ञान विषय पढेर कलाकारितामा लाग्छन् । कोही दुई चार वर्ष व्यवस्थापन पढेपछि थिएटर कक्षा धाउँछन्’ रंगकर्मी सरोज अर्याल भन्नुहुन्छ ‘कला र संगीतमा रुची भएका विद्यार्थीलाई स्कुलदेखि सिक्ने ठाउँ छैन । अनि आफूले इच्छाएको विषय पढ्न धेरै हन्डर ठक्कर खानुपर्छ ।’
अनि सुरु भयो नवराजको संघर्ष !
कलाकार बन्नैका लागि बालबालिकाले हन्डर ठक्कर खान नपरोस् भनेर आजभन्दा १० वर्षअघि नवराज बुढाथोकीले बाल नाटक महोत्सव आयोजना गर्न सुरु गर्नु भएको हो ।
शैली थिएटरको आयोजनामा रसियन कल्चर सेन्टरमा चलिरहेको यो १० औँ बाल नाटक महोत्सव हो । पहिलो बाल नाटक महोत्सव २०६६ सालमा सम्पन्न भएको थियो । त्यतिबेला जम्मा तीन वटा नाटकबाट शुरु भएको महोत्सवमा अहिले २० वटा विद्यालयबाट छनौट भएका बाल नाटक सहभागी छन् । सैमध्येको एक हो नाटक ‘पूर्णिमाको सपना’ ।
महोत्सवमा शैली थिएटरको आफ्नै नाटक पनि मञ्चन भइरहेको छ । दैनिक तीन वटा जति नाटक प्रदर्शन हुने महोत्सवमा कलिला विद्यार्थीले आफ्नो प्रतिभा देखाइरहेका छन् भने अग्रज रंगकर्मीबाट परिपक्व अभिनय कला सिकिरहेका छन् ।
सुपरस्टार बन्ने सपना पालेर बसेका पूर्णिमा नाटककी कृष्णाजस्ता कलिला विद्यार्थीका लागि यो ठूलो महाकुम्भ हो । यसैका लागि रंगकर्मी बुढाथोकीले रेडियो सगरमाथादेखि शैली थिएटरसम्म संघर्ष गर्नु परेको छ ।
‘रेडियो सगरमाथामा हामीले बाल कार्यक्रम चलाउँथ्यौ । कति कार्यक्रममा बाल नाटक पनि गर्‍याैँ । तर कति रेडियोमा मात्रै बाल प्रतिभाका कुरा गर्नु भनेर २०६६ सालमो बाल नाटक महोत्सव आयोजना गरेका हौँ’ रंगकर्मी सरोज अर्यालतर्फ फर्किंदै बुढाथोकीले भन्नुभयो ‘ त्यतिबेला ३ वटा नाटक थिए । यस वर्ष २० वटा विद्यालय छनौट भएर महोत्सवमा सहभागी छन् । यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’
उहाँका अनुसार त्यतिबेला बालबालिकाको प्रतिभा रेडियोका बाल कार्यक्रममै सीमित थिए । बाल प्रतिभालाई रेडियोको स्टुडियोभन्दा बाहिर ल्याउन खोज्दा धेरैलाई पत्यार लागेकै थिएन । अर्यालसँग मिलेर सुरु गरेको महोत्सवमा आज हजाराैँ बालबालिकाले थिएटरमा प्रत्यक्ष उभिएर नाटक खेलेको देख्दा बुढाथोकी प्रफूल्ल हुनुहुन्छ ।
‘बालबालिकामा प्रतिभा छ । नाटकको जग नै उनीहरु हुन् । तर कसले त्यो अवसर दिने ? कसले पल्याटफर्म दिने भन्दा सब चुपचाप थिए । हामीले केही फरक गरौँ न त भनेर शुरु गरेको बाल नाटक महोत्सव अहिले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा चम्किरहेको छ ।’
बालबालिकाले पाइरहेको दुःख, समस्या र हिंसाबारे नाटकबाटै बोल्न थालेका छन् । अर्थात कतै न कतै बालअधिकार हनन भएमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । अनि अधिकारका लागि सचेतना जगाउनमा पनि यसले ठूलो भूमिका खेलेको छ । अर्कोतर्फ उनीहरुको प्रतिभा पनि प्रष्फुटन भएको रंगकर्मी बुढाथोकीको भनाई छ ।
सुपरस्टार सपना अब कसले पूरा गरिदिने ? शिक्षक वा जनप्रतिनिधिले ?
अहिले काठमाण्डौ उपत्यकामा पर्याप्त थिएटर छन् । कला र संगीत विधाबारे उपत्यकाका धेरैजसो निजी विद्यालयमा पढाई पनि हुन थालेको छ । कतिले विद्यालयमा त कतिले बाहिरै पनि संगीत र अभिनय सिक्ने मौका पाएका छन् ।
तर उपत्यका बाहिरको हकमा यो अझै पनि एकादेशको कथा जस्तै छ । धेरै विद्यालयमा संगीत र अभिनय कक्षा भनेको रेडियो नेपालमा बज्ने नाटकमै सीमित छ ।
जसले सुनेका छन् । तर कहिल्यै त्यसलाई अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । अर्थात नाटक र संगीत पनि सिक्न पाइन्छ र ? भन्ने अवस्थामै छन् ।
अर्का रंगकर्मी तथा साहित्यकार पुरु लम्साल कक्षाकोठामा अभिनय कक्षाभन्दा पहिला विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यक्रममै नाटक विधा समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
‘नाटक विधा भनेको ७० प्रतिशत अभ्यास अर्थात प्रयोगात्मक र ३० प्रतिशत मात्रै सैद्धान्तिक विषय हो । यसका लागि पहिला पाठ्यक्रममै व्यवस्था गर्नुपर्छ’ लम्साल भन्नुहुन्छ, ‘अनि मात्रै नाटक विधालाई कक्षाकोठासम्म लैजान सकिन्छ ।’
पहिलेको तुलनामा कक्षाकोठामा अभिनयकलाबारे चर्चा, परिचर्चा, छलफल र चासो बढ्न थालेको छ । केही विद्यालयमा त पढाई पनि शुरु भएको छ । तर यो पर्याप्त छैन ।
‘पहिलेको तुलनामा केही न केही विकास भएको छ । अलिकति भए पनि अभिनय र संगीत क्षेत्र व्यवसायिक बन्न थालेको छ’ लम्साल अगाडि भन्नुहुन्छ, ‘तर यस क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि पहिला जग बलियो हुनुपर्छ । त्यो जग भनेको आजका बालबालिका हुन् । स्कुलदेखि नै विद्यार्थीले यस क्षेत्रबारे जान्ने बुझ्ने मौका पाए मात्रै भोलि घर बलियो हुन्छ ।’
रंगकर्मी अर्याल र लम्साल महोत्सवमा निर्णायक अर्थात ‘जज’को भूमिकामा छन् । रंग पत्रकार स्मृति ढुंगाना पनि निर्णायककै भूमिकामा हुनुहुन्छ । बाल नाटकमा बालबालिकाको क्षमता, प्रतिभा र अहिले पाएको अवसरलाई तीनै जनाले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
तर कहिलेकाहीँ फाट्टफुट्ट हुने नाटक महोत्सव, स्कुलका अतिरिक्त क्रियाकलापले मात्रै बालबालिकाको प्रतिभाले सफलता पाउन नसक्नेमा तीनै जना सहमत छन् ।
स–साना भए पनि केही बालबालिकामा परिपक्व र सबैलाई लोभ्याउने अभिनय कला छ । तर त्यो अवसर नपाएर उनीहरुभित्रै गुम्सिएको छ, खुम्चिएको छ ।
अहिले विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् । स्थानीय स्तरमा भविष्यका सुपरस्टार जन्माउने नाटक, कला र संगीतबारे विद्यार्थीलाई सिकाउने मौका यही हो ।
‘स्थानीय तहसँग अहिले बजेट छ । विद्यालयले पनि त्यही स्थानीय तहबाट बजेट पाउने हो । अब त्यो बजेटको केही अंश नाटक, अभिनय र संगीत कक्षाका लागि किन नछुट्याउने ?’ रंग पत्रकार स्मृति ढुंगाना भन्नुहुन्छ, ‘आखिर राष्ट्रका गहना भनेर चिनिने कलाकार भनेका तिनै बालबालिका हुन । जसलाई आज राम्रो शिक्षा दिक्षाको खाँचो छ ।’
शुरु शुरुमा जनशक्तिको अभाव देखिए पनि अहिले बजारमा पर्याप्त रंगकर्मी छन् । कति पेशागत रुपमा सक्रिय छन् भने कतिले बर्षौ रंगक्षेत्रमा बिताएका छन् । उनीहरुलाई निश्चित निजी स्रोतमै नियुक्त गरेर हरेक विद्यालयमा नाटक र संगीत विधा पठनपाठन गर्ने हो भने अहिले हरेक विद्यालयका विद्यार्थी भोलि सुपरस्टार बन्न सक्छन् ।
तर यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको गहिरो इच्छाशक्ति हुनुपर्ने महोत्सव संयोजक तथा रंगकर्मी बुढाथोकी बताउनुहुन्छ ।
‘आगामी बर्ष हुने महोत्सवमा हामी ७ वटै प्रदेशका विद्यालयलाई छनौट गर्ने सोचमा छाैँ । यसका लागि हरेक प्रदेशमा पनि छनौट प्रतियोगिता हुन्छ । त्यही अवसर पनि धेरै बालबालिकाका लागि प्रतिभा देखाउने ठाउँ बन्छ’ रंगकर्मी बुढाथोकीले भन्नुभयो ‘अहिलेदेखि नै बालबालिकाले कक्षाकोठामै नाटक विधा पढ्ने मौका पाए भने उनीहरु नै भोलिका सुपरस्टार बन्ने हुन् ।’